Ukubuyekezwa Komkhiqizo we-E-commerce: Izizathu Ezi-7 Zokuthi Ukubuyekezwa Kwe-Inthanethi Kubaluleke Kumkhiqizo Wakho | Martech Zone
NgoMsombuluko, Januwari 14, 2019 ULwesine, May 7, 2020 UJuliette Anderson
Umuntu kungenzeka ukuthi uqaphele ukuthi kuya ngokuya kujwayelekile kumabhizinisi, ikakhulukazi kulabo abasemkhakheni we-e-commerce, ukufaka izibuyekezo kumawebhusayithi abo. Lokhu akuyona indaba yemfashini, kepha intuthuko efakazele ukuthi isebenza kahle kakhulu ekutholeni ukwethenjwa kwamakhasimende.
Ukuze amabhizinisi e-commerce, kubalulekile ukuzuza ukwethenjwa kwamakhasimende, ikakhulukazi okokuqala, ngoba ayikho indlela yokuthi abone imikhiqizo ngokoqobo. Amakhasimende amaningi anqikaza kakhulu ukuthenga ezitolo ezincane eziku-inthanethi njengoba kubonakala sengathi awethembekile kangako uma kuqhathaniswa nabadlali abakhulu.
Elinye lamathuluzi asiza ukubhekana nalokhu ukubuyekeza okuku-inthanethi, futhi okulandelayo ngezinye zezizathu ezinhle zokuthi kungani kufanele ukwenze kusayithi lakho:
Kungani ukubuyekezwa okuku-inthanethi kubalulekile kumkhiqizo wakho
Ukubuyekezwa okuku-inthanethi kushayela ukuthenga - Isizathu sokuqala sokuthi kungani kubalulekile ukuthi umkhiqizo wakho ube ne- ukubuyekeza onlineukuthi kuthonya abantu ukuthi bathenge. Futhi, lokhu kudingeka kakhulu kubathengi bokuqala njengoba bengenalo ulwazi oludlule nebhizinisi lakho. Njengoba ukubuyekezwa okuku-inthanethi kukhulisa ubufakazi bezenhlalo, futhi njengoba ukubuyekezwa okuku-inthanethi kuvela kwamanye amakhasimende, amakhasimende amasha maningi amathuba okukucabanga futhi athenge. Amakhasimende okuqala athembela kakhulu empendulweni evela kumakhasimende anolwazi nawe, futhi uma impendulo ikuqinisekisa ngokwanele, abathengi bakho bokuqala kungenzeka ukuthi baqede ukuthenga kwabo.
Ukubuyekezwa okuku-inthanethi kukwenza ube ne-visibl ethe xaxae - Ukubuyekezwa okuku-inthanethi okuqukethwe ngokwakho. Okuqukethwe kusengenye yezinto ezibaluleke kakhulu ekusebenzeni kahle kwezinjini zokusesha, ngakho-ke ukuba nokuqukethwe ngesimo sezibuyekezo eziku-inthanethi kungasiza ukwenza umkhiqizo wakho ubonakale. Okuhle ngayo ukuthi ivela kumakhasimende akho ngakho-ke ngeke udinge ukuchitha umzamo omkhulu kule ndawo. Mhlawumbe inselelo okukuphela kwayo lapha ukukhuthaza amakhasimende akho ukuthi anikeze ngempendulo yawo, futhi enethemba lokuthi azokunikeza okuhle.
Ukubuyekezwa okuku-inthanethi kukwenza ubukeke uthembekile -Okuphambili kokubaluleka kokubuyekezwa kwe-inthanethi ukuthi kukhulisa ukuthembeka komkhiqizo wakho. Kunembile impela ukuthi kunzima kangakanani ukuthola ukwethenjwa kwamakhasimende okokuqala ngqa, ikakhulukazi uma umkhiqizo wakho ungathandwa kangako. Ngokuthola izibuyekezo eziku-inthanethi, usebenzela ukuthuthuka ekwethembekeni komkhiqizo wakho. Qiniseka ukuthi wenza konke okusemandleni akho ukuthola okungenani ibhizinisi lakho lilonke, kanye ukungeza izithombe zomkhiqizo ezisezingeni eliphakemeneminikelo ngoba izifundo zikhombisile ukuthi izilinganiso eziphansi kunezinkanyezi ezine zilithinta kanjani kabi ibhizinisi namathuba womkhiqizo wokuwina ukwethenjwa kwamakhasimende esikhathi esizayo. Kepha ungalokothi uphathe izilinganiso zakho - lokhu akulungile, futhi akufanele uthathe le ndlela.
Ukubuyekezwa okuku-inthanethi kunweba izingxoxo ezimayelana nawe - Enye into enhle ngezibuyekezo eziku-inthanethi ukuthi kuyasiza ukusabalalisa igama lomkhiqizo wakho. Ukubuyekezwa okuhle okwenziwe ngamakhasimende, ikakhulukazi lapho kufakwa kusayithi lakho, kukhuthaza lawa makhasimende ukuthi awahlanganyele kumanethiwekhi abo, okuvumela umkhiqizo wakho ukuthi uhambe kuze kufike kulokhu okuthunyelwe. Yenza okusemandleni akho ukufaka impendulo enhle kakhulu yamakhasimende, futhi uzijwayeze ukuphendula nakulezi zingqinamba. Kungakuhle futhi uma umzamo wakho wokufaka impendulo yamakhasimende ungaphezu kwesayithi lakho. Kwenze kuso sonke isiteshi sakho sokumaketha ezokuxhum. Ngale ndlela, kungakhululeka ngokwengeziwe kumakhasimende akho ukuthi abelane ngalokhu.
Ukubuyekezwa okuku-inthanethi kuya ngokuya kubalulekile ekwenzeni izinqumo - Ukuqonda ukubaluleka kokubuyekezwa okuku-inthanethi, nakanjani uzobona ukuthi kufanele kube yingxenye yecebo lakho lokumaketha. Kubaluleke kakhulu kunanini ngaphambili ukuthi ufake lokhu lapho wenza imikhankaso yakho. Kufanele uphathe ukubuyekezwa okuku-inthanethi njengomkhankaso uwedwa, uza namasu ahlukile ahlose ukukhulisa amandla akho okuthola impendulo enhle, nokwandisa imiphumela. Lapho kungenzeka khona, zama futhi ukukuhlanganisa neminye imikhankaso yakho. Zama ukuqhamuka namacebo aheha kakhulu afana nemincintiswano lapho amakhasimende akho azokunikeza khona impendulo yabo emikhiqizweni yakho. Nakanjani uzothola izimpendulo eziningi ezinhle ngale ndlela.
Ukubuyekezwa okuku-inthanethi kunomthelela oqondile ekuthengisweni - Ngenkathi sekushiwo ukuthi ukubuyekezwa okuku-inthanethi kunomthelela ekuthengweni, ngakho-ke ukuthengisa kuzothinteka ngokuqinisekile, kwenza okungaphezu kwalokho khulisa ukuthengisa kwakho. Ukubuyekezwa okuku-inthanethi akugcini ngokuwina abathengi besikhathi sokuqala kuphela, kodwa futhi kuthuthukisa ukwethembeka komkhiqizo, okuvumela amakhasimende akho ukuthi aqhubeke nokwenza ibhizinisi nawe. Futhi inqobo nje uma uqhubeka nokuhlinzeka ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme nezinsizakalo, uzoqhubeka nokuthola impendulo enhle, futhi umjikelezo uyaqhubeka. Kubalulekile ukuthi uhambisane nokuzinikela kwakho kwikhwalithi. Ngokwenza lokhu, uqinisekile ukukhulisa ukuthengisa kwakho ngokuqhubekayo.
Ukubuyekezwa okuku-inthanethi kukunikeza umugqa ovulekile kubathengi - Ekugcineni, ukubuyekezwa okuku-inthanethi kusebenza njengesiteshi sokuxhumana namakhasimende akho. Futhi isimilo sanamuhla sidinga ukuthi amabhizinisi aphendule. Lokhu akunandaba noma ngabe impendulo inhle noma iyimbi. Yize kujabulisa kakhulu futhi kulula ukuphendula empendulweni eyakhayo, kuyadingeka futhi ukuthi uphendule engemihle. Kufanele ukhombise amanye amakhasimende akho ukuthi uzokwazi kanjani ukubhekana nanoma yimiphi impendulo engemihle enganikezwa amakhasimende akho. Futhi, awuvunyelwe ukuphatha impendulo etholwa yibhizinisi lakho. Okufanele ukwenze ukubhekana nabo ngqo. Kufanele uveze ukuthi ibhizinisi lakho lisibambe ngokuqinile lesi simo.
Sebenzela kuzibuyekezo zakho eziku-inthanethi ukukhulisa umkhiqizo wakho
Isizathu esingenhla sichaza ngokusobala ukuthi kungani kubalulekile ukuthi ibhizinisi lakho lisebenzise izibuyekezo eziku-inthanethi. Uma ungenayo okwamanje, qiniseka ukuthi uqala manje. Uma usuwenzile vele, qiniseka ukuthi usebenza kuwo ngokwengeziwe ukuze ukwazi ukukhulisa izinzuzo ongazithola kukho. Ukuba nokubuyekezwa okuku-inthanethi kwebhizinisi lakho kubalulekile. Lokhu akunakuxoxiswana ngakho-ke qiniseka ukuthi uyakusebenzisa ngokusemandleni akho.
Tags: abathengiukwenza isinqumboe-commerceUkubuyekezwa okuku-inthanethi
UJuliette Anderson uyi-Outreach Community Specialist yenkampani yokugcwalisa i-e-commerce egxile kakhulu ekusebenzisaneni nabathengisi abakwi-inthanethi abanesisindo sephasela elijwayelekile lamakhilogremu ama-5 + noma ngaphezulu. Usebenza ngokubambisana nezitolo ze-e-commerce ukufeza ukuthengisa okuhle iminyaka emine. Ubungcweti bakhe bulele ekumaketheni kwezokuxhumana nakwenyuselwa imali.